४. हरेक काममा खुसी, सुखी तथा सन्तुष्ट बन्ने, दैनिक जीवनमा काम गर्दै जाँदा कहिले सफल भइन्छ, कहिले असफल। असफल हुँदैंमा हतास हुनुहुँदैन, बरु असफलताको कारण पत्ता लगाई सफलताको बाटोमा फेरि अगाडि बढ्नुपर्छ। निराश हुनुहुँदैन। अरुसंग पनि सरसल्लाह लिनुपर्छ। कहिलेकाँही हाम्रा अगाडि समस्या नै समस्या तेर्सिएर बसेका हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा आत्तिनु हुँदैंन। कतिपय समस्या आफै पनि समाधान भएर जान्छन्। ३, ४ महिनापछि आउने समस्यालाई लिएर पहिल्यै चिन्तित हुनुहुँदैन। बरू देखिएका समस्यालाई एउटा योजना बनाई यो पछि यो गर्छु भनी योजना बनाई अघि बढ्नुपर्छ। कतिपय मिडियाले राम्रो कुरालाई पर्दा पछाडि राखी नराम्रो कुरालाई प्रचार गर्छन् जसले गर्दा सर्वसाधारणमा बिग्रियो, भत्कियो, बेकार छ जस्ता भावना आउन सक्छ। तर वास्तविकता त्यस्तो हुँदैन। त्यसैले धेरै टीभी, रेडियो हेर्न सुन्न हुँदैन।
५. जे छ त्यसमा सन्तुष्ट बन्ने तर मेहनत गर्न नछाड्ने। धेरै मानिस आफू कहाँबाट आएको भन्ने कुरा पनि बिर्सन्छन्, विगतलाई बिर्सन्छन्, वर्तमानमा सन्तोष लिन चाहँदैनन्, किनभने समय पार गदै जाँदा ठुलो उन्नति भएको पनि बिर्सन्छन् र सधै असन्तोष भईरहन्छन्। विगतमा आफू कुन अवस्थामा थिएँ, अहिले कुन अवस्थामा आइपुगे भनेर मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरैजसो मानिस ठूलो प्रगति गर्दा पनि क्षणिक आनन्द लिन्छन्, त्यसले मनमा सन्तोष दिएको हुँदैन त्यसैले हामीले सन्तोष लिन सिक्नुपर्छ। तर मिहिनेत गर्न छाड्नु हुदैन। पूराना असफलता केलाउँदै लक्ष्यमा पुग्नुपर्छ।
१०.पहिले–पहिले मानसिक रोग भनिन्थ्यो तर अहिले मनोरोग भनिने गरिन्छ। मनोरोग भनेको टेन्सन हुनेदेखि कडा रोग सिर्जोफोनियासम्म पर्छ। अति सामान्य रोगदेखि कडा रोगसम्मका बिरामी यसमा पर्छन्। डिप्रेसन रोग लागेका बिरामीमा यस्तै चिन्ता हुन्छ कि मेरो दिमाग नै आउट हुन्छ तर त्यस्तो हुदैन। त्यसैले आत्तिन हुँदैन। सामान्य मनोरोग लागेका बिरामीले अनावश्यक चिन्ता लिनु हुँदैन। स्वास्थ्य खवर बाट ।
प्रकाशित मिति: मंगलवार, जेठ ३, २०७९, ०५:५७:१७